सीपीएलमा जमैकाको तेस्रो जित, सन्दीपले लिए २ विकेट ! | Diyopost
सीपीएलमा जमैकाको तेस्रो जित, सन्दीपले लिए २ विकेट !
काठमाडौं, १४ भदौ । ग्लेन फिलिप्सको अर्धशतक र कार्लोल ब्रेथइटेको उत्कृष्ट बलिङ मद्दतमा जमैका तल्लावाहजले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा तेस्रो जित हात पारेको छ ।
जमैकन बलरहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि १४८ रनको लक्ष्य पछ्याएको सेन्ट किट्स १९।४ ओभरमा ११० रनमै अलआउट भएको थियो । उसका लागि काएरन पावेल र एभिन लेविसले समान २१ रन बनाए ।
सेन्ट किट्सलाई अलआउट गर्न जमैकाका लागि ब्रेथवेइटले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ३ विकेट लिए । सन्दीप लामिछाने फिडेल एवारड्स र भिरास्वामी परमुलले २–२ विकेट लिए । ब्रेथवेइटले ३।४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ११ रन मात्र खर्चेर ३ विकेट लिए । सन्दीपले ४ ओभरमा २७ रन खर्चेर २ विकेट लिए । यस्तै परमुलले ४ ओभरमा २० रन खर्चिए ।